Ihe ndị achọrọ iji zụta ụlọ obibi na United States - Isiokwu
ozi olu agaghị arụ ọrụ na iphone
SIM anaghị akwado iphone 5
iphone 6s agaghị abụ nkwado ndabere na mpaghara icloud
ekwentị ọhụrụ agaghị ebudata ngwa
ihuenyo mmetụ m na iphone m anaghị arụ ọrụ
Ihe ndị achọrọ maka ịzụta ụlọ eji agagharị agagharị. Enwere ọtụtụ uru n'ịzụta ụlọ eji agagharị agagharị. Ndị ọnụahịa, n'ezie , na -adịkarị Ọtụtụ ala karịa ọkọlọtọ ụlọ ezinaụlọ. Na mgbakwunye, obodo ụlọ mkpagharị na -agụnyekarị oghere ndị ọzọ Kedu ọdọ mmiri , ụlọ egwuregwu na ụlọ egwuregwu .
Ihe ndị achọrọ iji zụta ụlọ mkpanaka
Ọ dị mkpa ịkọwa na dịka ngwa ahịa ndị ọzọ ịchọrọ ị nweta ọ dị mkpa na ị nwere akwụkwọ ụfọdụ.
N'okpuru, anyị ga -ekwupụta ihe ndị ị ga -eburu n'uche:
Nweta ikike ma ọ bụ ndebanye aha maka iji ụlọ ebugharị ebugharị nke Ọchịchị nyere.
Ndebanye aha ga -adịrịrị ugbu a.
Obodo nyere ikike idobe ogige.
Akwụkwọ anyị ka kpọtụrụ aha Ha nọ na mpaghara izugbe, yabụ ị kwesịrị ịkpọtụrụ ndị ọchịchị steeti .
Nzọụkwụ iji kwado ụlọ mkpanaka
Mgbe ị na -eme atụmatụ ịzụta ụlọ eji agagharị agagharị, ịkwesịrị ịme ihe ole na ole.
Kpebie ma ịchọrọ ịzụta ala na ụlọ mkpanaka ma ọ bụ naanị ụlọ mkpanaka. Ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ịgbazite ngwugwu maka ụlọ gị, ị ga -eru eru maka obere mgbazinye ego karịa ma ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ịzụta ala ebe a ga -etinye ụlọ ahụ.
Chọpụta nkọwa nke ụlọ ịchọrọ ịzụta. Nke a ga -emetụta mgbazinye ego ị nwere ike itinye maka ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ụlọ nwere obosara okpukpu abụọ nke na-efu $ 100,000 ma ọ bụ karịa, ị gaghị eru eru maka mgbazinye ụlọ. FHA .
Malite na -achọ nhọrọ ego. Họrọ ụdị mbinye ego (FHA, chattel, nkeonwe) ị ga -eji ma tulee onyinye nke ndị na -agbazinye ego dị iche iche. Gbalịa ịchọta mbinye ego nwere obere ụgwọ yana ọmụrụ nwa dị ala ka ị wee nwee ike nọrọ obere oge enwere ike na oge mbinye ego ahụ.
Ozugbo ịhọrọ onye na -agbazinye ego, tinye akwụkwọ anamachọihe gị. Jide n'aka na ị dejupụtara akwụkwọ anamachọihe nke ọma yana nwee ọganiihu zuru oke iji nye onwe gị ohere kacha mma maka iru eru maka mbinye ego ahụ.
Ịzụta ụlọ na -agagharị agagharị: ihe ịkwesịrị ịma
Ị nwere mmasị n'ịzụta ụlọ eji agagharị agagharị? Ọ bụghị naanị gị. Enwere ihe ndị ọzọ 8 nde ụlọ obibi n'ime US ( isi mmalite ). Ụlọ ndị a na -agagharị agagharị na -ewu ewu n'ihi ha dị ọnụ ala karịa karịa ụlọ ndị a na -emebu. Ọnụ ego etiti ụlọ mkpanaka na 2015 bụ $ 68,000, dị ka akwụkwọ akụkọ si kwuo Ụlọ Ọrụ Mgbakọ United States . Ọnụ ego etiti nke otu ụlọ ezinaụlọ bụ $ 360,000.
Ya mere, ụlọ ndị na -agagharị agagharị na -enwe echiche akụ na ụba. Mana ọ bụrụ na ị na -eche ịzụta ekwentị, gịnị bụ usoro ego kacha mma?
Kedu kpọmkwem ụlọ obibi?
Ebe obibi a na-agagharị agagharị bụ ụlọ nke onye nrụpụta wuru na saịtị ma ebuga ya na ụlọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na -akpọ ha ụlọ arụpụtara ma ọ bụ trailers. Ụlọ ndị na-agagharị agagharị n'ozuzu na-abịa n'ụdị abụọ: otu obosara, ogologo, warara, yana ụdị kọmpat; na obosara okpukpu abụọ, nke nwere oghere okpukpu abụọ ma nwee mmetụta dị ka ụlọ ezinaụlọ nke ọdịnala n'ime.
Nwere mmasị? Ndị a bụ ihe ị ga -ama maka ịzụrụ ụlọ eji agagharị agagharị:
Ị nwere ike ịnwe nhọrọ ego pere mpe.
Ọ bụrụ na ị na -eche ka esi enweta nnyefe maka ụlọ mkpanaka gị , enwere ihe ole na ole ị kwesịrị ịma. Ndị ụlọ akụ na -atụle ụlọ ndị na -agagharị agagharị dị ka ihe onwunwe nkeonwe karịa ezigbo ụlọ, yabụ na ha nwere ike ịnye gị ego nkeonwe. Inwe ohere ka mma inweta mgbazinye ego n'akaonye na -agbazinye egoỌ ga -adị mkpa ka ị hụ na ụlọ mkpanaka na -ejikọ na ntọala kpamkpam.
Ọ bụrụ na ịchọghị ịgbada n'ụzọ ahụ, ndị otu kredit nwere ike ịnye nnyefe ụlọ ụlọ mkpanaka. Ị nwekwara ike ịrịọ maka mbinye ego nkeonwe ma ọ bụ gbazinye ego n'aka onye na -ere ụlọ na -agagharị agagharị.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị ebe ị na -etinye akwụkwọ maka mgbazinye ego, onye na -agbazinye ego gị nwere ike chọọ ka ụlọ gị mezuo ihe ndị chọrọ Ngalaba ụlọ na mmepe obodo (HUD) Nke a pụtara na ị ga -ewe onye ọrụ ngo pụrụ iche ka ọ rụọ ọrụnyocha ụlọma gosi ya.
Ị nwere ike zụta n'ogige ntụrụndụ ma ọ bụ zụta ala iji tinye ụlọ gị.
Ị nwere ike iche na ụlọ ndị na -agagharị agagharị na -adị n'ogige ntụrụndụ ụlọ mkpagharị, mana ọ bụghị ya. Enwekwara ike ịzụta ụlọ eji agagharị agagharị yana ala ọ nọ na ya, nke nwere ike ịbụ nnukwu ala dị n'oké ọhịa.
Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na -azụ ahịa maka ụlọ obibi ọhụrụ, ị nwere ike ịga ebe ọ bụla ịchọrọ. Ogige ụlọ mkpanaka nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị adaba n'ihi na ha enweworị njikọ njikọ yana ihe ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na nzuzo (ma zere ụgwọ saịtị) Ọ bụ ihe kacha gị mkpa, ị nwere ike zụta ngwugwu nke gị ka itinye ya, ma ọ bụrụhaala na ị dị njikere iburu ọnụ ahịa ndị ọzọ wee jikwaa ngwa ndị ahụ n'onwe gị.
Ọ bụrụ na ịzụrụ ahịa na ogige, tinye ego na mmefu ego gị.
Banyere ụgwọ saịtị: Ịzụta site na ogige ụlọ mkpagharị nwere ike ịdị ọnụ ala karịa ịzụrụ ala, mana ọ ka nwere ụgwọ. Ọtụtụ ogige ntụrụndụ ụlọ na -akwụ ụgwọ ụlọ maka nza, nke na -ewe ihe dị ka $ 300 kwa ọnwa ma na -ekpuchikarị mkpokọta mkpofu, mmiri, ọwa mmiri, na ndozi ala.
(Nlekọta ụlọọ dịzịrị gị). Nke a na -eme n'ọnọdụ ndị na -enweghị ala n'okpuru ụlọ mkpanaka gị, naanị ụlọ n'onwe ya.
Mana n'ogige ntụrụndụ ụfọdụ, ị nwe ala. Obodo ndị a na -enwekarị mkpakọrịta ndị nwe ụlọ ( Ifuru ) nke ndị nrụpụta ogige ma ọ bụ ndị bi na ya na -arụ. HOA na-esetịpụrụ obodo iwu, ụgwọ na-agakarị n'etiti $ 200- $ 300 / ọnwa.
Ego gị na -ekpuchikarị ihe mkpofu, mmiri, nsị mmiri, na ndozi ogige. Ị ga -achọkwa ịgbaso iwu ndị nwe ụlọ, nke nwere ike ibelata ụcha ụlọ gị nwere ike ịcha na ebe ị ga -adọba ụgbọala, na ihe ndị ọzọ.
Ụlọ ndị na -agagharị agagharị na -efunahụ oge.
A na-eji ndị nwe ụlọ na-eche na ụlọ ga-abawanye uru ka oge na-aga, nke ụlọ ndị otu ezinụlọ na-emekarị. Mana nke ahụ bụ n'ihi na ha na -araparakarị n'ụwa, ụwa bụkwa ihe n'ezienwee ekele. Ụlọ ndị na -agagharị agagharị nke na -adịghị na unyi adịghị abawanye uru, ọ nwere ike siere ha ike ịregharị karịa ụlọ oge niile.
Mana ihe niile dabere na ihe ị chọrọ n'ụlọ gị na nke gịego ole ka ị nwere ike imeli. Ọ bụghị ndị nwe ụlọ niile na -azụta ụlọ dị ka itinye ego, ọ bụghịkwa onye ọ bụla nwere ike ị nweta ụlọ obibi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ebe dị ọnụ ala ị ga -ebi na -enweghị ọtụtụ ndozi ụlọ, ịzụrụ ụlọ nwere ike ịbụ nhọrọ zuru oke.
Ụlọ arụpụtara, ụlọ mkpanaka, na ụlọ modulu
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na ebe a na -agagharị agagharị, ị kwesịrị ịmalite site n'ịmụta lingo na -eso ya. Ịmara usoro okwu ndị a ga -enyere gị aka ịghọta ụzọ ego dị. Ọ na -enyekwa gị ohere ka gị na ndị na -agbazinye ego na -ahụ maka ịzụrụ ihe kwurịta okwu nke ọma.
A na -akpọ ụlọ ọhụrụ ndị na -agagharị agagharị ụlọ arụpụtara. A na -ewu ụlọ prefab n'ụlọ nrụpụta ma tinye ya na chassis na -adịgide adịgide. N'ihi chassis, enwere ike ịkwaga ha ngwa ngwa. Ọ bụ chassis na -akọwa ụlọ arụpụtara dị ka mkpanaka.
Ngalaba na -ahụ maka ụlọ na mmepe obodo (HUD) tinyere ụkpụrụ iwu ụlọ maka arụpụtara / mkpagharị na 1976.
A ka nwere ike ịkpọ ụlọ ndị nwere chassis na -adịgide adịgide wuru tupu mgbe ahụ, ụlọ ndị na -agagharị agagharị, mana ọ nwere ike ọ bụghị iwu ya na ụkpụrụ 1976.
Nsonaazụ mbụ nke iwu 1976 bụ akwụkwọ HUD akpọrọ Aha njirimara na efere data . Asambodo ndị a na -acha uhie uhie, nke a ga -ahụrịrị n'ime ụlọ. Ihichapụ ha bụ iwu na -akwadoghị.
Mkpado HUD dị mkpa karịsịa mgbe ịzụrụ, ree, nye ego, na mkpuchi ụlọ arụpụtara. Ọ bụrụ na ịnweghị akara HUD, ọ ga -esiri gị ike ịnweta ụdị ego ọ bụla.
Unu agbagwojula arụpụtara ya na ụlọ arụrụ arụ ma ọ bụ arụpụtara. A na -ewukwa ụlọ arụpụtara n'otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Agbanyeghị, enwere ike wuo ha na chassis na-adịgide adịgide ma ọ bụ gbanyụọ, nwere chassis na-ewepu ya. A na -adọkpụkarị ndị a n'ala nkeonwe wee kpọkọta ebe ahụ.
A na -ahụkarị ụlọ ndị na -agagharị agagharị na ala mgbazinye (ogige ntụrụndụ ụlọ).
Ịkwado ego maka ụlọ mkpanaka vs. nnyefe omenala
Ihe kacha echebara echiche mgbe ị na -akwụ ụgwọ ụlọ na -agagharị agagharị bụ ma ị nwere ala ebe ọ dị (ma ọ bụ na ọ ga -adị).
Ọ bụrụ na ị nwere ala ma chọọ ego maka ụlọ arụpụtara, ị nwere ike nweta mgbazinye ụlọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo ụlọ, ọtụtụ ndị na -agbazinye ego agaghị anabata gị maka nnyefe.
Ọ bụrụ na ịnweghị ala, tụlee itinye akwụkwọ maka mgbazinye ego n'aka United States Federal Housing Authority ( FHA ), n'ihi na ọ bụghị ihe achọrọ maka mbinye ego FHA. Ọ bụrụ na ị tozuru oke, tụlee ị nweta mgbazinye ụlọ site na Ngalaba Veterans Affairs nke United States (VA) Ha na -enye mgbazinye ego maka ụlọ arụpụtara yana nza.
Ọnụ ego FHA
Dị ka e kwuru n'elu, mgbazinye ego sitere na Aha m nke FHA ha anaghị achọ ka onye gbaziri ego nwe ala ahụ. Agbanyeghị, onye gbaziri ego ga -agbazinye otu ala ahụ opekata mpe afọ atọruru eru maka ego FHA.
FHA abụghị onye na -agbazinye ego. Yabụ, ị ga -achọta onye na -agbazinye ego akwadoro iji gbazinye ego FHA. FHA na -enyocha mkpuchi mgbazinye ego, nke na -eme ka ha mara mma karịa ndị na -agbazinye ego n'ihi na ha nwere obere ihe egwu ma ọ bụrụ na mbinye ego agbazinye.
Ihe mbinye ego maka mgbazinye ego FHA dị mfe iru eru karịa ọtụtụ mgbazinye ego. Ịkwụ ụgwọ ala nwere ike pere mpe karịa na mgbazinye ego - dị ka 3.5% nke ọnụahịa ịzụrụ. N'ozuzu, ọmụrụ nwa na-adịkwa ala site na mbinye ego FHA kwadoro.
Ọ bụrụ na ị nwere kredit ọjọọ (akara kredit nke 550 ma ọ bụ obere), ị ka nwere ike nweta ego FHA. Ị nwere ike iru eru maka mbinye ego FHA ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nwere odida n'oge gara aga. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị na -agbazinye ego agaghị enye gị ego mgbazinye ma ọ bụrụ na ị nwere kredit dara ogbenye ma ọ bụ nkezi.
Otu ndọghachi azụ nke mgbazinye ego FHA bụ na ha nwere obere oge karịa nnyefe ego. Mgbazinye ego dị maka afọ 30; Imirikiti ego mgbazinye FHA iji zụta ụlọ mkpanaka nwere oge nke afọ 20.
Mbinye ego FHA nwekwara oke ego ịgbazinye ego ịtụle. N'ihe dị ka afọ 2017, njedebe maka ụlọ arụpụtara bụ $ 69,678. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta nza, njedebe bụ $ 23,226. Oke a bụ $ 92,904 maka ụlọ arụpụtara yana ihe onwunwe. ( Isi mmalite )
Mmachi ọzọ ị ga -atụle bụ na mgbazinye ego FHA bụ naanị nhọrọ ma ọ bụrụ na ụlọ mkpanaka bụ ebe obibi mbụ gị. N'otu aka ahụ, ndị na -agbazinye ego mgbazinye ego, ndị na -agbazinye FHA ga -enyocha ọrụ gị, ụgwọ ọnwa, akụkọ kredit na akara kredit iji chọpụta ntozu, ọnụego ọmụrụ nwa, yana usoro ndị ọzọ.
Ọnụ ego VA
Dị ka ego mgbazinye FHA, ego Na -aga na -ekwe nkwa mgbazinye ego site na ịme mkpuchi ha megide ndabara. VA n'onwe ya anaghị eme mgbazinye ego. Ịkwesịrị ịchọta ụlọ ọrụ kredit na -enye mgbazinye VA.
Ndị otu ndị agha, ndị agha ochie na ndị di na nwunye ha tozuru oke maka mgbazinye ego VA. VA na -ekwe nkwa mgbazinye ego maka ụlọ arụpụtara yana nza.
Iji ruo eru maka mbinye ego VA, ị ga -achọ Asambodo Ntozu (COE). Akwụkwọ a na-egosi ndị na-agbazinye ego na ị tozuru maka mgbazinye ego nke VA kwadoro. Lelee ebe a COE chọrọ.
Dị ka ego mgbazinye FHA, ụlọ arụpụtara ga -abụrịrị ebe obibi mbụ gị. Ka akwadoro gị maka mbinye ego VA, ị ga -enyerịrị akụkọ gbasara ọrụ gị, ọrụ ugbu a, ụgwọ ọnwa, na akụkọ kredit.
Ego ole ka nọọsụ na -enweta na United States? - ntuziaka zuru oke
Ego ole ka m ga -enweta iji zụta ụlọ na USA?
Enyemaka Maka ndị na -azụ ụlọ oge mbụ na Florida
Ego ole ka a na -eri ozu ọkụ na United States?
Ego ole ka mkpuchi mkpuchi ihe na -efu na United States?
Kedu ihe na -emezigharị ụlọ